काठमाडौं । सांसदको तजबिजमा रहने गरेको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’अन्तर्गतको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा न्यून खर्च भएको छ । कोरोना महामारीकै बीचमा २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदको रोहबरमा खर्च गर्नेगरी ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको उक्त रकममध्ये १ अर्ब पनि बजेट खर्च भएको छैन । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’मा रू. ९६ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ ।
त्यसयताका प्रत्येक अर्थमन्त्रीले यसको रकम बढाउँदै लगेका थिए भने यसको नाम पनि परिवर्तन हुँदै आएको थियो । यो रकमबाट विकास निर्माणभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएकाले यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले यो कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा भंग गरेको सरकारले आगामी बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीय सरकारले यस्तो खालको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश सरकारले पनि यसको सिको गर्न थालेका थिए ।